Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 28:1-20
28 Pashure peSabata, pazuva rekutanga revhiki, kunze kwava kuedza, Mariya Magadharini nemumwe Mariya vakaenda kunoona guva racho.+ 2 Kudengenyeka kwenyika kukuru kwakanga kwaitika, nekuti ngirozi yaJehovha* yakanga yaburuka ichibva kudenga, ikakungurutsa dombo, uye yakanga yakagara pariri.+ 3 Yakanga ichiratidzika semheni, uye zvipfeko zvayo zvakanga zvakachena sechando.+ 4 Varindi vakaitya, zvekuti vakadedera, vakaita sevanhu vakafa. 5 Asi ngirozi yakati kuvakadzi vacho: “Musatya, nekuti ndinoziva kuti muri kutsvaga Jesu uyo akarovererwa.+ 6 Haapo pano, nekuti akamutswa, sekutaura kwaakaita.+ Uyai muone paakanga akarara. 7 Mobva makurumidza kuenda kunoudza vadzidzi vake kuti iye akamutswa kuvakafa, uye ari kutofanotungamira kuGarireya.+ Muchanomuona ikoko. Yeukai zvandakuudzai.”+ 8 Saka vakabva paguva nekukurumidza, vachitya uye vachifara zvikuru, uye vakamhanya kunoudza vadzidzi vake.+ 9 Jesu akabva asangana navo akati: “Kwaziwai!” Ivo vakasvika paari, vakamupfugamira, vakabata tsoka dzake. 10 Jesu akabva ati kwavari: “Musatya! Endai munoudza hama dzangu kuti dziende kuGarireya, uye dzichandiona ikoko.” 11 Pavakanga vachienda, vamwe vevarindi+ vakapinda muguta vakaudza vatungamiriri vevapristi zvese zvakanga zvaitika. 12 Ava vakabva vaungana nevakuru, vakarangana, ndokupa varwi masirivha akawanda, 13 vakati: “Munoti, ‘Vadzidzi vake vakauya usiku vakamuba takarara.’+ 14 Kana izvi zvikasvika munzeve dzagavhuna, tichamutsanangurira nyaya yacho,* saka munenge musisina chekutya.” 15 Saka vakatambira masirivha acho vakaita zvavakanga vaudzwa, uye nyaya iyi yakaparadzirwa kwese kwese pakati pevaJudha kusvikira nhasi. 16 Asi vadzidzi 11 vakaenda kuGarireya+ kugomo uko Jesu akanga arangana navo kuti vaizosangana.+ 17 Pavakamuona, vakamupfugamira asi vamwe vakanga vasina chokwadi kuti ndiye. 18 Jesu akaswedera pedyo navo akati kwavari: “Ndakapiwa masimba ese kudenga nepanyika.+ 19 Saka endai munoita kuti vanhu vemarudzi ese vave vadzidzi,+ muchivabhabhatidza+ muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene, 20 muchivadzidzisa kuchengeta zvese zvandakakurayirai.+ Uye yeukai kuti ndichange ndiinemi mazuva ese kusvikira pakuguma kwenyika.”*+
^ ChiGir., “tichamunyengetedza.”
^ Kana kuti “kusvikira kumagumo kwemamiriro ezvinhu.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.